ကနျြးမာရေး | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အပေါ် Posted 22.07.2021 22.07.2021
အပေါ် Posted 16.02.2021 16.02.2021
အဆိုးရွားဆုံးသောရောဂါများသည်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုမဟုတ်ဘဲ၊ Schizophrenia သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ Schizophrenia သည်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းနှင့်အပြုအမူနှင့်အတွေးအမြင်ကွဲပြားခြားနားမှုများမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားစေနိုင်သည်
နွေ ဦး ။ နံနက်ယံ၌နေရောင်ခြည်သည်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်တွင်ရှိပြီးငှက်များသည်သီချင်းဆိုနေကြသည်။ သို့သော်နိုးထလာသည်နှင့်အလုပ်များပြီးနောက်တွင်ဘာမှမစွမ်းနိုင်တော့ပါ။ မနက်ဖြန်လိုခံစားရတယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း "Levomekol" ဆီမွှေး
ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အခြေအနေအသစ်ကိုရရှိခြင်းနှင့်အတူမျှတသောလိင်သည်သူမ၏ဘဝပုံစံကိုအကြီးအကျယ်ပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ ထို့ကြောင့်မျှော်လင့်ထားသည့်မိခင်အများစုသည်သူတို့၏အာဟာရနှင့်သုခချမ်းသာကိုအထူးဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ကြသည်။ သို့သော် ...
အီလက်ထရောနစ်စီးကရက် "Pons" - အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များ၊
ဆေးလိပ်သောက်သူအများသည်မိမိတို့နှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများအတွက်သူတို့၏အလေ့အထကိုတတ်နိုင်သမျှလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်လိုသောဆန္ဒရှိပြီးအီလက်ထရောနစ် vaping ကိရိယာများသို့လှည့်ကြသည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီအကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့နည်းလမ်းကပိုပိုပြီးလူကြိုက်များလာတယ်။ အကောင်းဆုံး ...
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူများစွာဟာဘယ်မှာအလုပ်အတွက်ဆေးစစ်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ ပြည်သူ့ဆေးခန်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာများမှာထိုက်တန်သည့်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုသာရှိသည်။ ပြည်နယ်ဆေးခန်းတွေအကြောင်းသူတို့အားလုံးမှာရှိသည်။
လူတစ် ဦး ၏အနိမ့်စွန်းကြွက်သား: ဖွဲ့စည်းပုံ, လုပ်ဆောင်ချက်များကို
အောက်ပိုင်းခြေလက်များ (ခြေထောက်များ) သည်မျှမျှတတကြီးသောဝန်ကိုသယ်ဆောင်သည်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များလှုပ်ရှားမှုနှင့်ထောက်ခံမှုပေးပါဝင်သည်။ ဆောင်းပါးမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ခန္ဓာဗေဒအနိမ့်စွန်းရဲ့ကြွက်သားတွေအားလုံးကိုအားအမြင့်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါး "Raunatin": အဘယ်အရာကိုကူညီ? ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု၏ဖော်ပြချက်
များသောအားဖြင့်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဆရာ ၀ န်များက Raunatin ဆေးကိုလူနာများကိုညွှန်းသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှမည်သည့်အရာကအကူအညီလဲ၊ မည်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင်ဆေးနှင့်သောက်သုံးခြင်းကုထုံးလိုအပ်သနည်း။
ရင်းနှီးသောကျန်းမာရေး - ရာသီလာခြင်းအကြားသွေးထွက်ခြင်း
အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးရှုပ်ထွေးတယ်။ ဟော်မုန်းနောက်ခံကြောင့်လစဉ်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်သည်။ သံသရာ၏တည်ငြိမ်မှုသည်မျှတသောလိင်၏ကျန်းမာရေးကိုသွယ်ဝိုက်ဖော်ပြသည်။ သို့သော်မကြာခဏအမျိုးသမီးများလှည့်ရန်ရှိသည် ...
ဦး ခေါင်း၏ကွန်ပျူတာ tomography: လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အထူးသဖြင့်အာရုံကြောစနစ်မှပြproblemsနာများကိုတွေ့ရှိပါကလူနာ၏တိုင်ကြားချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဦး ခေါင်း၏ကွန်ပျူတာတွက်ချက်ခြင်း (tomogram) သည်၎င်း၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါကတစ်ခုပါ။
သွေးစစ် immunoassay (immunogram) အင်္ဂါရပ်များလက္ခဏာများ, အပြင်
Immunological blood test ဆိုတာလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရောဂါရှာဖွေမှုရလဒ်များသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကုထုံး - သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကျောရိုးရှိအူအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၏အူကျရောဂါနှင့်အတူကျွမ်းဘားအဘယ်သို့ဖြစ်သင့်သနည်း
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည်အူသိမ် (အူမ) အူရီသည်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင်မမျှတသည့်အင်အားကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးရောဂါဗေဒတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရောဂါ၏လက္ခဏာများသည်လူနာအားလုံးတွင်တူညီသည်။ လူတစ်ယောက်သည်လည်ပင်း၊ ဦး ခေါင်း၌နာကျင်မှုခံစားရသည်။
Anticholinergics: စာရင်း။ anticholinergic မူးယစ်ဆေးဝါး၏လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား
Anticholinergics ဆိုသည်မှာ cholinergic receptor များအပေါ်တွင်သဘာဝဖျန်ဖြေသူ၊ acetylcholine ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့စေသောဆေးများဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားစာပေများတွင်ဒီဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများကို delirium ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောစွမ်းရည်ကြောင့် deliriums ဟုခေါ်သည်။
အဆိုပါဆေး "Resorcinol": အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်
Resorcinol ၏ကုထုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမှာအဘယ်နည်း။ အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များ၊ ဤဆေး၏ဓာတ်ပုံများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု, ပုံစံများကို resorcinol ကဘာလဲ? အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များကဤအရာဝတ္ထုကိုဖော်ပြသည်။
သွေးတိုး encephalopathy ကဘာလဲ? အကြောင်းရင်းများ, ရောဂါလက္ခဏာများ, ကုသမှု
Cerebral ischemia, လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနှင့် encephalopathy တို့ကိုအများဆုံးလေးနက်သောရောဂါများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သူတို့ကမကြာခဏဆိုးဝါးဖြစ်ကြသည်။ ဦး နှောက်ရောဂါဗေဒအမြောက်အများအနက်မှ encephalopathy သည်အထူးအာရုံစိုက်ထိုက်သည်။ ဤသည်ကျယ်ပြန့်ရောဂါအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ...
Obninsk, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာ: ဖော်ပြချက်, အထူးကု, န်ဆောင်မှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လူ့ကျန်းမာရေးကိုအမြဲ ဦး စားပေး ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင်လူအများကပြည်နယ်ဆေးပညာသည်ယင်း၏အသုံးဝင်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူနာများသည်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများသို့သွားလိုကြသည်။
အဆိုပါဆေးဝါး Biltricid: analogues, ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကုသမှုအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Helminthiasis သည်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသာမန်ပြproblemနာတစ်ခုမှာကုထုံးမရှိခြင်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆေးပညာသည်ကပ်ပါးကောင်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသန့်စင်ပေးနိုင်သည့်ကုစားနည်းများကိုပေးသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခု ...
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုရိုးရာဆေးပညာတွင်ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်ဆေးတစ်လက်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောထိုင်ခုံများနှင့်မစင်များမှအူကိုလွယ်ကူစွာစွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်သည့်ရောဂါဗေဒများကိုဖယ်ရှားရာတွင်လည်းကောင်းအသုံးပြုသည်။ ရည်ညွှန်းသည် ...
bronchial ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါများအတွက်အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှု။ bronchial ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ
Bronchial ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်နာတာရှည်ခြင်းနှင့်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသောနာတာရှည်မတည့်ရောဂါဖြစ်သည်။ ဤရောဂါသည်ကလေးများရောလူကြီးများတွင်ပါဖြစ်ပွားသည်။ နှစ်စဉ်ဒီရောဂါဗေဒခံစားနေရတဲ့လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်။
ရင်သားကင်ဆာသည် mammologist နှင့်တိုင်ပင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
သင့်ရင်ဘတ်မှအရည်များရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါသလား။ သင်ထိတ်လန့်သင့်သလော။ ဒါမှမဟုတ်ဒါကလုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလား။ အဘယ်ရောဂါသည်ရင်ဘတ်မှထွက်သောရောဂါလက္ခဏာဖြစ်နိုင်သနည်း။ မင်းအတွက် ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 218 Next ကို 's Page
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,135 စက္ကန့်ကျော် Generate ။